ရွေးချယ်စရာ ကံကြမ္မာ ( Henry Aung ) — PALNet
ရွေးချယ်စရာ ကံကြမ္မာ ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တို့ Hive platform လည်း HF ပြီးသွားသည့် တိုင် ယခုအချိန်ထိ တည်ငြိမ်မှုမရနိုင်သေးပါ။ Post တင်ခြင်း ၊ vote ပေးခြင်း ၊ comment ပေးခြင်းများတွင် ယခင်ကလောက် မြန်ဆန်မှုမရှိတော့ပါ။ ကျွန်တော် ယခင် ဆောင်းပါးများတွင် ဖေါ်ပြပေးပြီးဖြစ်သည့် အတိုင်း HF က မိခင် token အား ရိုက်ခတ်စမြဲ ဖြစ်ပါသည်။
Hive အတွက်ကတော့ HF ပြီးသွားပြီး နောက် အများကျေနပ်စရာ ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလည်း ပြနိုင်စွမ်း မရှိသော ကြောင့် Hive token များ အကျဈေးဘက်သို့ ဦးတည်လျက် ရှိနေပါတော့သည်။ ဤနေရာတွင် Hive ကို စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာသလောက် Leo ကို စိတ်ဝင်စားသူ တဖြည်းဖြည်း များပြားလာနေပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လက်ရှိအနေအထားတွင် Leo platform က Hive platform ထက်ပို၍ တည်ငြိမ်နေသလို Leo platform တွင် ရည်မှန်းချက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေပြီး တခုပြီးတခု ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖေါ်နေပါသည်။ ထို့အပြင် ယခုနောက်ဆုံး Leo wallet အား METAMASK နှင့်တွဲ လိုက်သည့် အတွက် Leo Platform အား စိတ်ဝင်စားသူ ပိုများ လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေတို့ သိပြီး ဖြစ်သည့် အတိုင်း METAMASK သည် Ethereum ERC-20 token များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားနိုင်သည် ဖြစ်ရာ Leo platform အသုံးပြု၍ Blogging လုပ်သူတို့ Leo token မှ Eth အပါအဝင် မိမိတို့ လိုချင်သော ERC-20 token တိုင်းအား အလှဲအလည် လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
တနည်းဆိုရလျင် Leo platform တွင် Blogger လုပ်ခြင်းဖြင့် မိမိကြိုက်ရာ Cryptocurrency ရရှိနိုင်မည့် သဘောသဘာဝပင် ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်ဆိုရလျင် မိခင်ဖြစ်သော Hive platform သည်ပင်လျင် ထိုမျှ စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။
Hive အနေဖြင့် သူ၏ မူလရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သော SMTS များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည်လား ...? သို့ မဟုတ် အခြားသော နည်းလမ်းများ ဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား စွဲဆောင် မည်လား ...? မည်သူမျှ မသိနိုင်သေးပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Hive platform သည် ဦးဆောင်သူမရှိ ၊ ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ ၊ ဦးတည်ရာမဲ့ ရွက်လွင့်နေသော အနေအထား သို့ ရောက်ရှိနေသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Blogging လုပ်၍ အကျိုးအမြတ် ရစတမ်းဆိုလျင် လူအများက Leo platform သို့ ကူးပြောင်းသွားကြတော့မည်မှာ သေချာသလောက် ရှိနေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် Leo တွင် Hive ထက် ပို၍ တိကျသော ရည်ရွယ်ချက် ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ၊ လမ်းစဉ်များ ချမှတ်၍ သွားနေသည်ကို သိမြင်နေရသလို ၊ မိမိရည်မှန်းချက်ရောက်အောင်လည်း အဆင့်တခုပြီးတခု ချပြနေသည်ကို လက်တွေ့ မြင်တွေ့နေရပါသည်။
အရိုးရှင်းဆုံး ဥပမာပြရလျင် METAMASK နှင့် တွဲနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်ဆိုရလျင် မိခင် platform ဖြစ်သော Hive သည်ပင်လျင် ထိုသို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ဤ အခြေအနေမျိုးတွင် ကျွန်တော့ အတွေးအား ဒွိဟ ဖြစ်စေပါသည်။ Hive သည် ရည်ရွယ်ရာ မရှိသေး ၊ သို့သော် အစွယ်အပွား ဖြစ်သော Leo က Hive ထက်သာနေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Leo က လမ်းပြမြေပုံ ရှိနေပါသည်။
ဆိုတော့.... Leo နာမည်ကြီးလာသည်နှင့် အမျှ Hive သည် အောက်ရောက်သွားဖို့သာ ရှိနေပါတော့သည်။ ယခု အခြေအနေတွင် ပင်လျင် Hive power စုသူ နှင့် Leo power စုသူ တို့ အမြတ်ထွက်သည်ခြင်း မတူကြတော့ပါ။ တချိန်တွင် Leo platform အနေဖြင့် Steemit မှ Hive ခွဲ ထွက်သလို Leo အနေဖြင့် Hive မှ ခွဲထွက်သွားသည် ရှိခဲ့သော်.... ကျွန်တော့ အတွေးသာ ဖြစ်ပါသည်။
Cryptocurrency လောကသည် မာယာများလွန်းလှပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်နေသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ကျွန်တော့တွင် ပြသနာ တခုတက်နေပါသည်။ Hive power စုမည်လား ...? Leo power စုမည်လား ..? ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် အခြားသူငှာများကဲ့သို့ Power သိန်း သန်းချီ၍ ဝယ်စုနိုင်ခြင်း မရှိရကာ ... ပို၍ ကောင်းသော Platform အားသာ ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Hive power အား Leo power ပြောင်းမည်လား..? သို့မဟုတ်... Hive ဖြင့်သာ ကျေနပ်နေကြမည်လား ...?
ကျွန်တော် နားလည် ထားသလောက် Cryptocurrency တွင် အခွင့်အရေး ၂ ခါရလေ့မရှိပါ။ သို့သော် .... Steemit မှ စခဲ့သော ကျွန်တော်တို့သည် အခွင့် အရေး အချို့ ရခဲ့ကြပါသည်။ ပြန်ပြင်ရေးရလျင် Cryptocurrency တွင် အခွင့်အရေး ၂ခါ ရလေ့မရှိပါ... သို့သော် Power စုထားလျင် ကံကောင်း တတ်ပါသည်။
#myanmar #life #blockchain #knowledge #sharing #palnet #leo #neoxian #hive
ဟုတ်ပါ့ဗျာ... ဘယ်နောက်ကို လိုက်ရမှန်းမသိကို ဖြစ်နေပြီ။
HF တင်တာ ရည်ရွက်ချက်ကြီးတော့ ရှိတန်ကောင်းရဲ့
ခုတော့ သုံးရတာ အဆင်မပြေတာ ပိုလာနေတာ မဟုတ်သေးသလို
လမ်းပြမြေပုံ မချပြတာလည်း ပြောရခက်
သူတို့ကတော့ Real Decentralised blockchain ဆိုတာကြီး
လွှတ် ဂုဏ်ယူနေကြပြန်ရော ခက်ပါလားဗျာ
မတတ်နိုင်ဘူးလေ... အဆင်ပြေသလို ကြည့်သွားရမှာပါ့။
အမယ်မင်း ကံကောင်းဖို့ ဆုတောင်းနေရတော့မှာပ။
Hive လူကြီးမင်းတို့ရယ် တကတည်း leo လို လုပ်ကြပါတော့လား။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ... နေပဲ နေနိုင်လွန်းကြတယ်။ ကိုယ်တေက မလုပ်တတ်လို့သာပဲ.... အားမရချက်တော့။
Leo လည်း မရှိ Hive က မများ ဒုက္ခများလှ ပါတယ်ဗျာ
အားမတန် မာန်လျှော့ရတော့မလို ငိုချင်နေပါပြီ
ဒီလိုပဲ ကြည့် စခန်းသွားရမှာပဲ။